Kutanga unboxing yeiyo iPhone 13 Pro mune yegoridhe ruvara | IPhone nhau
Vhidhiyo yekutanga unboxing yeiyo iPhone 13 yegoridhe inoonekwa pamambure izvo zvingangodaro zvisina kunge zvakashambadzirwa kwemazuva mashoma, asi yanga isati yavepo. Iyi ndeimwe yeaya mavhidhiyo anogamuchira mamirioni ekushanyirwa uye kwete chaizvo nekuda kwemhando yekugadzirisa. Iyi vhidhiyo ndiyo yekutanga kuburitswa pamambure uye izvo inoratidza unboxing yeiyo nyowani iPhone 13 Pro Max.
Tine chokwadi chekuti iyo nyowani iPhone 13 ichave neakanaka mashoma mavhidhiyo pamambure uye kwete chaizvo akagadzirwa nemakamera ayo ane simba. Aya marudzi emavhidhiyo anogara achifarirwa uye kana iwe uri wekutanga kuigovana paYouTube social network chokwadi iwe unowana yakanaka shoma yekushanya.
Iyo YouTube chiteshi SalimBaba technical, ndiye aive nebasa rekuburitsa vhidhiyo iyi uye zvine musoro kuti zvine chekuita neisina unboxing mavhidhiyo eJustine kana akanaka ekare Marque. Chero zvazvingaitika ndezvekuti, ona zvirimo mubhokisi reiyo nyowani iPhone 13 modhi, mune ino Pro Pro modhi yegoridhe. Iyi ndiyo vhidhiyo:
Vhidhiyo inoratidza zvakajeka zvinowedzerwa mubhokisi reiyo nyowani iPhone 13 Pro Max modhi. Iyo yekuchaja tambo, iyo diki mirairo uye ndizvozvo. Unboxing yeiyi nyowani iPhone 13 inotiyeuchidza nezve yapfuura iPhone modhi, iyo 12. Hapana mhando yechaja inowedzerwa mubhokisi. Svondo rino isu tichatanga kuona mamwe mavhidhiyo akafanana neaya, mune chero mamiriro ezvinhu isu tinotarisira kuti neimwe shanduro yakamboshanda kunyangwe zvisiri zvakafanira nekuti iyo iPhone 13 haina kuwedzera chero chinhu chitsva kupfuura izvo zvatakaona mumhando yapfuura.
Seyetsamba vangadai vakaratidza here kuti zvimiti zveApple zvaive neruvara rwegoridhe? 😄
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Kutanga unboxing yeiyo iPhone 13 Pro mugoridhe